Ndeupi musiyano uripo pakati pemhepo inofefetera mhepo uye inotonhorera emhepo? | Lianchuang
Mhepo inogadziridza ndiyo inowanzoshandiswa kutonhora maturusi muzhizha. Ivo vanowanzo gadziriswa. Kuti zvive nyore, kune nharembozha maairimendi uye maacircon emusika, uye hapana kana imwe yakagadziriswa. Saka ndeupi musiyano uripo pakati peanofambisa mhepo mahara uye maacircon?
1. Chii chinonzi mobile air conditioner?
Nhare inofambisa mhepo inodzora mhepo inodzivisa iyo inogona kufambiswa paunoda. Kune macompressors, pedza mafeni, magetsi emagetsi, evaporator, mweya-wakadzora mafinha ekugadzirisa uye zvimwe zvigadzirwa mumuviri. Mutumbi unogadzirirwa neplagi yemagetsi uye hwasiyasi yechassis yakagadzirirwa ma casters. nhare. Chitarisiko chine fashoni, chakareruka uye chinoshamisira.
2. Chii chinonzi mhepo inotonhorera?
Mhepo inotonhorera mhando yemidziyo yemumba ine fan uye mhepo-kutonhodza maitiro. Iyo ine akawanda mashandiro senge emhepo kupa, firiji, uye humidification. Ichishandisa mvura senge iri yepakati, inogona kutumira mweya unotonhorera pazasi pekupisa kwemukati kana mweya unodziya. Mazhinji anotonhorera emhepo ane firita yevhu yekusefa mweya. Kana paine nhete yephotocatalyst pane guruva firita, inogona zvakare kuve neiyo sterilization maitiro.
Chechitatu, mutsauko uripo pakati pemhepo inofefetera mhepo uye inotonhorera emhepo
1. Iyo mobile air conditioner ine diki modhi uye vhoriyamu, uye inoyevedza uye inotakurika. Iyo nhare yemhepo inogadziridza imhando yemhepo inofefetedza mweya inopwanya nepfungwa yechinyakare dhizaini, idiki, ine simba rakaringana reshiyo, ruzha rwakaderera, haidi kuiswa, uye inogona kuiswa mudzimba dzakasiyana pamadiro.
2. Iyo inotonhorera yemhepo inoshandisa mvura senge yepakati uye inogona kuendesa mweya unotonhorera pazasi pekupisa kwemukamuri kana mweya unodziya uye wakanyorova. Inofananidzwa nemagetsi mafeni, mhepo inotonhorera ine mashandiro emhepo nyowani uye kubvisa hwema. Mhepo inotonhorera haigone chete kudzivirira iyo yemagetsi mita kuti irege kugumburwa, asi zvakare ive inotonhorera uye inozorodza kunzwa.
Chechina, chiri nani, nhare yemhepo inotonhorera kana inotonhorera mweya
1. Mhepo inotonhorera inogona kudzikisa tembiricha neinenge 5-6 madhigirii kupfuura mafeni akajairika, ine simba shoma rekushandisa, haina basa rekudzikisa humisi, uye inowedzera mwando wemhepo painoshandiswa, iyo inokodzera zvakanyanya nzvimbo dzine mamiriro ekunze akaomarara. Iyo tembiricha yekugadzirisa mhedzisiro yakada kufanana neiyo yechinyakare mweya maaconders. Iyo inogona pachena kugadzirisa tembiricha yemukati memhepo, uye inogona kugadziridzwa kune akasiyana tembiricha sezviri kudikanwa. Nekudaro, mushure mekushandisa, iyo yekunze mweya tembiricha haina yunifomu, izvo zviri nyore kukonzera kusagadzikana uye mweya wekutonhodza mweya. Panguva imwecheteyo, simba iguru uye simba rekushandisa rakakura.
2. Iyo mobile air conditioner inokodzera hofisi, yekunze nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji. Iko kushandiswa kwesimba uye mutengo wemafoni emhepo makomendi akanyanya kukwirira.